Thelekisa iGPS-Leica, Magellan, Trimble kunye neTopcon- iGeofumadas
Agasti, 2013 GPS / Izixhobo, Ukuprinta kokuqala, Topography
Kuqhelekile, xa kusenziwa ukuthengwa kwezixhobo zokuhlola, kuyafuneka ukwenza uthelekiso lweGPS, izitishi zizonke, isoftware, njl. Geo-matching.com yenzelwe oko kanye.
I-Geo-matching is site yeGomares, inkampani efanayo epapasha iphephancwadi GIM International. Ukuba siyakhumbula, eyona nto iphambili kweli phephancwadi kukwenza uphononongo olupheleleyo lweetekhnoloji ezahlukeneyo ukuze zisetyenziswe kwicandelo le-geomatics. Ukuthelekisa i-Geo ayisiyonto ingaphezulu kokuthatha olu hlaziyo kwiitheyibhile ezilinganayo ukuze isigqibo sithathwe phantsi kweendlela ezifanayo okanye ezingafaniyo.
Inkqubo iphuhliswe kakuhle, inoluhlu ukuza kuthi ga ngoku kwiindidi ze-19, ngaphezulu kwe-170 yababoneleli kunye neemveliso ezingaphezulu kwama-500. Izigaba zibandakanya:
Ukuqhubekeka komfanekiso weSoftware yokuqonda ekude
Izitulo zomsebenzi we-photogrammetry
Iinkqubo zokuhamba ngeenqanawa
Iinqwelo zokuhamba ngeenqanawa kunye nolwandle
Iinkqubo zeSanar zokuskena
Ikhamera ye digital digital
Iinkqubo zokuskena iLaser
Iimpawu ze-GIS, i-hardware kunye nesofthiwe yeselula
Ukubonisa indlela esisebenza ngayo siya kwenza uvavanyo kunye nezixhobo ezine zeGPS:
Oku kunjalo ukuba siquka ukufaniswa kweGPS:
Udidi lukhethiwe, emva koko ziimpawu kunye namaqela ekugqibeleni. Ngasekhohlo iqela elikhethiweyo liphawulwe.
Ukhetho luxhasa kuphela iindlela ezi-4, kodwa zinokususwa kwaye zibekwe kungcamlo, kugcinwe ukhetho kudidi. Kwaye kumzekelo wethu esi sisabelo esikhethiweyo seGPS.
Ulwazi luhlinzekwa ngabavelisi bezixhobo, ngoko ke ukuba balahlekile yiphoso labo.
Iinkalo ezithandayo, kule fayili ye-GPS:
Unyaka wokuphehlelelwa kweqela: I-Trimble Juno yayikho ngo-2008, i-Topcon GRS-1 ngo-2009 kunye neLeica kunye neMagellan ngo-2010. Kule meko, sibandakanyiwe izixhobo ezindala zeTrimble ukuze ubone ukuba ukusebenza kwongezwa njani unyaka nonyaka, okwenza kube lula ukuthelekisa ukungathathi hlangothi. Kukho intsimi ebonisa ukuba isekhona kwimveliso.
Zonke ngaphandle kweTrimble Juno zinesoftware ebandakanyiweyo: IMagellan iza ne-Mobile Mapper Field / Office Mapper Office nangona ikwaxhasa iArcPad, iLeica Zeno 5 iza neZeno Field / iZeno Office kunye neTopcon eGIS. Kwezi zintathu kunokubonwa ukuba umda osikelwe umda yiZeno njengoko ingavumeli ukuhlelwa kweempawu.
Konke, ngaphandle kwe-Trimble Juno inkxaso GLONASS
Ngokumalunga nexesha lokubamba elibandayo lenqaku lokuqala, elona xesha lifutshane yiTrimble Juno (imizuzwana engama-30), ngelixa ubuninzi yiLeica Zeno 5 (imizuzwana eyi-120). Ezinye ezimbini zikwimizuzwana engama-60.
Ngokumalunga nenkqubo yokusebenza, bonke basebenzisa iWindows Mobile 6, ngaphandle kweZeno 5 ehlala i-archaic isebenzisa iWindows CE. Ayikuxhasi ukulayisha idatha kwiseva ekude.
Ubuthathaka kubomi bebhetri yiTopcon, ineeyure ezi-5 kuphela ngelixa ezinye zinikezela ngeeyure eziyi-8. Ukuthatha isigqibo ukuba sijonga ukuba usuku lokusebenza olunzulu luphakathi kweeyure ezi-6 nezisi-8, kuthathelwa ingqalelo ubunzima bomgama kunye nezothutho kwiindawo ezinofikelelo olungekho mgaqweni.
Ngokuphathelele uxhumano, i-Zeno 5 ixhotyiswe kakuhle, isekela zombini iintambo ze-archaic kunye nekhadi le-GSM ye-intanethi.
Kwaye ngokuchaneka, esona siqinisekiso sikwiMobileMapper, ebonelela nge-submeter ngaphandle kokucwangciswa kweposi, isentimitha ngokulungiswa emva kunye ne-RTK yeemilimitha. Nangona iTopcon ixhasa amanye amajelo, akucaci ngokuchaneka kwawo.
Ngoko, ukuba ukhetha phakathi kweli qela leekhomputha ze-4, ukhetho luphakathi kwe-Spectra MobileMapper 100 kunye ne-Topcon GRS-1.
Yintoni engekho kolu thelekiso lwe-GPS ngamaxabiso. Ke siya kusebenzisa Google Shopping kwezi njongo:
MobileMapper 100 I-3.295,00 US $, kubandakanywa isofthiwe ye-post-processing
Ukuqhawula iJuno T41 I-US $ 1.218 eneWindows kunye ne-US $ 1.605 nge-Android
I-Topcon GRS-1 5.290,00 US $
Leica Zeno 5 … Akukho xabiso kuGoogle Ivenkile kodwa ixabisa iUS $ 4.200
Ekugqibeleni, sicinga ukuba kuyinkonzo enxulumene ne-Geo-matching, ngokukodwa kuba ijolise ekukhetheni ukhetho olufanelekileyo lwezixhobo ezifunekayo kwintsimi ye geomatic.
Yona imfundo ngenxa yokuba ungaphaya kokuthelekiswa kwe-GPS onokuyibona umzekelo, izitishi ezipheleleyo, izixhobo zokuhamba ezizimelayo, ukuthelekisa phakathi kwemifanekiso ye-satellite evela kubanikezeli abahlukeneyo, ukungafani phakathi kwe-ArcPad ye-iPad, iWindows ne-Android entsha.
Ixesha, ukuvota kwabasebenzisi, izimvo kunye nokudibanisa kwabathengi abaninzi banokwenza i-Geo-efanayo neengcamango ezibonisa umdla.
Post edlulileyo«Ngaphambilini IiMagazini zeGeomatics-Eyona ndawo iphambili kuma-40
Post Next Izikolo ze-AutoCAD ze-3D zama-Free-Revit - Microstation V8i 3DOkulandelayo »
2 Iphendula kwi "GPS Thelekisa-Leica, Magellan, Trimble kunye neTopcon"
Sawubona, kusasa ekuseni eSpeyin.
Ngokwam, ndincoma iqhinga lokwenza ukuthelekisa iinkqubo ezahlukeneyo zeGPS kunye nezixhobo, kunye nezikhululo ezipheleleyo.
Ingaba luhlobo oluthile lokubhenela abantu abanomdla wokufumana iqela kwaye banomsebenzi wangaphambili owenziweyo, ukususela ekufundweni kweempawu zamashishini ezedatha.
Iphuzu elibi kukuba, ngelishwa, izixhobo eziyekiweyo zichazwe kwaye ezintsha kwiimarike azifakiwe.
Njengokuba esithi, mhlawumbi kunyaka 2013, waba ngokubanzi nezisasaziweyo, kodwa izixhobo Trimble leyo ifana kakhulu naleyo ezinye brand ifanisa lo Trimble Geoexplorer GEO5.
Trimble t41, yaziwa kwamanye amaqela geoposcionamiento njengoko JUNO5, kukho kuzise eziliqela, port 3G okanye hayi, Android okanye Windows Mobile. Unyaka we-2014 wandise uluhlu ngokuphucula i-SBAS kwi-1 imitha.
Gerardo Salinas uthi:
Eli nqaku linomdla kakhulu